Kooxda Kubadda Cagta ee Real Madrid ayaa ku guulaystay Horyaalka La Liga markii 34-aad ee Taariikhda kooxda iyo waliba markii ugu horaysay tan ilaa xilli ciyaareedkii 2016/2017 kadib guul ay ka gaadheen kooxda Villarreal kana dhacay garoonka Alfredo Di Stefano.
Ciyaarta ayaa si dagan ku bilaabatay ka hor inta uuna Daafaca Dani Carvajal bilaabin fursadaha Los Blancos daqiiqadii 5-aad kadib markii uu kubad xoogan ku laagay goolka Villarreal iyada oo uu Goolhayuhu si fudud gacanta ugu dhigay.
Kubad haysashada Real Madrid ayaa gaadhay 61% iyada oo Villarreal kaliya kubada haystay 39% iyada oo xiddigaha Real Madrid wadeen samaynta fursadaha ay ku raadinayaan goolasha.
Xiddiga Kooxda Villarreal ee Gerard Moreno ayaa daqiiqadii 20-aad isku dayay in uu halis galiyo goolka Real Madrid laakiin Daafaca Real Madrid ayaa iska saaray kubadaas.
Daqiiqadii 29-aad ayay Real Madrid dhalisay goolka 1-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay weeraryahanka Karim Benzema kaas oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa kadib kubad cajiib ah oo uu ka helay Luka Modric kadibna shabaqa dhexdhigay kubada kana dhigay ciyaarta 1/0.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybta hore ee ciyaarta oo ay Los Blancos ku hogaaminayso 1/0 una jirto ku guulaysiga horyaalka kaliya 45 daqiiqo.
Qaybtii dambe ee ciyaarta ayay Villarreal u muuqatay kuwo dar-dar ku bilowday iyaga oo ahaa kooxda fiican waliba ciyaarayay weeraro rogaal celis ah oo halis a.
Los Blancos ayaa dhankeeda qaadaysay weeraro laakiin aan sidii qaybtii hore ugu cad-cadayn in ay goolal dhaliyaan laakiin Ramos iyo Varane ayaa si fiican u difaacday.
Real Madrid ayaa sii waday dadaalka xilli ay Villarreal Lafteedu samaysay fursado ay ku doonaysay goolka bar-baraha ee ay ciyaarta ugu soo laabanayso.
Daqiiqa 76-aad ayaa Real Madrid loo dhigay rikoodhe kadib markii khalad lagu galay kabtanka kooxda ee Sergio Romas kaas oo weerar kooxdiisa ah hogaaminayay.
Ramos ayaa arin la yaab leh sameeyay isaga oo dul istaagay rikoodhada laakiin Baas u dhigay Karim Benzema kaas oo dhaliyay goolka 1-aad laakiin Garsooraha ayaa arintaas diiday maadama ayna jirin xeer sheegaya in ay laba xiddig isku baasi karaan rikoodhe.
Karim Benzema ayaa markii dambe si caad ah u laagtay rikoodhada isaga oo ka dhaliyay goolkii 2-aad ee kooxdiisa iyo goolkiisii 2-aad ee shaqsiga ahaa ee ciyaarta.
Daqiiqadii 84-aad ayay Villarreal dhalisay goolka 1-aad ee ciyaarta iyaga oo uu madax qurux badan u dhaliyay xiddiga Vicente Iborra kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/1.
Real Madrid ayaa dhalisay goolka 3-aad daqiiqadii 90+5 laakiin Goolkaas ayaa laga diiday iyada oo ciyaartu sii ahayd 2/1.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay Real Madrid sidaas ugu guulaystay horyaalka La Liga markii ugu horaysay muddo 3 sano ah halka ay koobka u dabaal dagyay markii 34-aad ee taariikhdooda.
Previous Kooxda Kubadda Cagta ee Manchester United oo Garaacday Kooxda Aston Villa
Next Kooxda Kubadda Cagta ee Manchester United oo Guul Wax Ku ool ah Ka gaartay Kooxda Crystal Palace
4 Arrested In 2016 Shooting Death Of Toronto Man (8,513)
Waa Maxay Jecel ?? Iyo Suaalo kale Kaga Bogo Warbixin Wariye Jacfar (3,278)
Aqriso Liiska Gudoomiyeyaasha caawa loo magacaabay Degmooyinka Gobolka Banaadir. (963)
14 hours ago allbalcad